Ogaden News Agency (ONA) – Sidaan horey u sheegnay Itobiya waxay cadeysay in aanay Shabaabka khatar ku ahayn dalka Itobiya
Sidaan horey u sheegnay Itobiya waxay cadeysay in aanay Shabaabka khatar ku ahayn dalka Itobiya
Posted by ONA Admin	/ September 27, 2013
Dina Mufti oo ah afhayeen WAD ee Itobiya ayaa sheegay in aanay Shabaabka wax handadaad ah ku haynin nabadda qaranimada Itobiya (Ethiopian national Security). Wuxuu intaa sii raaciyay inay ciidankooda iyo nabadsugidooda awoodaan ka difaaca Shabaabka dalka Itobiya (Halkan Ka akhri).
Waxaa la yidhi si kastoo loo qariyo runta mar umabaa la ogaadaa. Hadalka afhayeenka Itobiya wuxuu kaga jawaabayay iyadoo wargaysyada ka soo baxa dalka Itobiya ay qaarkood digniin ka bixiyeen in Shabaabka uu ka fulin karo Adisababa mid u dhigma falkii ay ka fuliyeen Nairobi.
Wuxuu intaa raaciyay afayeenka Itobiya in aanay ka baxaynin Somaliya inta Shabaabka la daciifinayo oo nabadgalyo iyo xasilooni uu ka helayo dalkaa, taasoo ka dhigan markaan fiirino qorshaha Itobiya iyo xidhiidhka hoose ee ka dhexeeya iyaga Shabaabka in aanay waligeed ka bixi doonin sababtoo ah qaska ka socda waxaa huriya Itobiya oo kolba koox cusub abuuraya.
Horaan u sheegnay inuu xidhiidh hoose ka dhexeeyo Nabadsugidda Itobiya iyo kooxdan Al-shabaab, waxaanan soo ogaanay oo dad badan oo goobjooge ka ahaa ay noo soo wariyeen inay Itobiya hubka siiso Shabaabka, arintaa ma’aha bay ydihaahdeen wax hadda ka qarsoon Somalida.
Badbaadada shucuubta Geeska Afrika waxay ku jirtaa iyadoo la’iska kaashado khiyaanada Itobiya gaar ahaan maamulka TPLF/EPRDF ay kula dhex jirto guud ahaan shucuubta Geeska Afrika gaar ahaan Somaliya.